🥇 ▷ Marcos Galperin: sida uu ula yimid abuurista Mercado Libre iyo waxa "trampita" uu adeegsan jiray si uu uga dhaadhiciyo maalgashadaha koowaad ✅
Marcos Galperin: sida uu ula yimid abuurista Mercado Libre iyo waxa “trampita” uu adeegsan jiray si uu uga dhaadhiciyo maalgashadaha koowaad
Bishii Ogosto 2019, Mercado Libre waxay jirsatay 20 jir, wadadaas kadib, way is bedeshay. Sidan ayaa ah aasaasayaasheedu uga soo dhaqaaqeen ganacsade una socday ganacsade
Wuxuu ku koray qoys u heellan ganacsi dhaqameed. Wuxuu wax ku bartay jaamacad ku taal Ivy League. Wuxuu aasaasay shirkad u gaar ah garaash. Waxay kortay, waxay ku dhowdahay inay xirto, isku daydo inay iibsato, dhibaatooyin ayaa soo food saartay oo hadda amar ku siisay shirkadda ugu qiimaha badan dalka.
Tani waxay umuuqataa sheeko bilyaneer caadi ah oo hogaaminaya darajada Bloomberg, laakiin waa mid lagu soo koriyay gobolka aad u fog ee Buenos Aires.
Ku dhawaad ​​20 sano ayaa ka soo wareegatay markii Marcos Galperín aasaastay Mercado Libre – fikradiisi hore ay ahayd inuu ugu yeeray Libre Mercado – khudbadiisiina waxay ka baxday rabitaanka “shirkada xaraashka ugu weyn ee internetka” ilaa kor u qaadista summada dimoqraadiyadda ee lacagta iyo ganacsiga.
Wuxuu ku dhashay muuqaalka iyo muuqaalka eBay, shirkadda ayaa is beddelaysa oo hadda waxay aad ugu egtahay nooca Alibaba, in kasta oo qaar badani ay ku tilmaameen “Amazon Creole.”
Oo ah “Argentina” si fiican loo soo nooleeyay ee garoonka diyaaradaha si loo gaaro garoonka, inuu noqdo moodhalka ganacsatada maxalliga ah qabow xafiis la’aanteed, Galperín wuxuu u taagan yahay sidii weyn iska dhigay milyaneer Argentine ee kunka sano ee cusub.
Bishii Ogosto 2019, Mercado Libre ayaa jirsatay 20. Intii lagu jiray wakhtigaas wuxuu ku qasbanaaday inuu la qabsado duruufaha oo uu beddelo. Waxaa laga beddelay shirkad xaraashka tooska ah ee internetka oo loo beddelo mid sidoo kale socodsiiya lacagaha – iyada oo loo marayo Mercado Pago -, deyn deyn ah, maalgalin dhaqaale oo xitaa u oggolaanaysa maalgashi maalgashi maalgashi oo caadi ah.
5000 oo isticmaaleyaal ah ayaa isdiiwaangaliyay inta lagu gudajiray bishii koowaad, waxay kuxisaabtay 267 milyan dheelitirnaanteedii ugu dambeysay. Intaas waxaa sii dheer, aasaaskeeda ayaa is bedeshay, maadaama lugta iibinta alaabtu ay carshi u ahayd tii bixinta, taasoo sanadkii 2018 ay ku dhaqaaqday $ 18,450 milyan, 35% in ka badan intii sanadkii hore.
Soo bixitaanka MeLi – oo ah kan lagu qoray liiska Nasdaq ilaa 2007 oo shaqaaluhu ay tixraac u yihiin – waxaa lagu kufsaday caloosha Stanford University, halkaas oo wiilkaas ku barbaaray San Isidro oo uu ku sameeyay MBA.
In kasta oo waagaas uu soo maray xilliyadii dhaqaale ee Bonanza iyada oo ay u mahadcelinayso Sadesa, tannery waxa aasaasay awoowe hooyadeed sanadkii 1941, qoyskiisu ma ahayn kuwa hodan ah. Galperín wuxuu lacag la’aan ka yimid Ruushka kahor Dagaalkii Labaad ee Dunida, sidoo kale Lebachs, qoysku wuxuu ka yimid hooyadood, oo ka yimid Jarmalka.
Ka hor intaanu ku dhex aadin jaamacadda Californian, wuxuu hore u noqday qofkiisii ​​ugu horreeyay ee qabiilkiisa wax ku bartay dalka dibadiisa. Kuma uusan sameyn waxbarashadiisa shahaadada koowaad ee Argentina laakiin, wuxuu dhiiri geliyay jahwareerka jaamacada dadweynaha iyo la’aantiis shaqsiyaad gaar ah si ay u qanciyaan, wuxuu u suurtagashay inuu galo Iskuulka Ganacsiga ee Wharton ee Jaamacadda Pennsylvania.
Wiilkii nerdy-ka ahaa ee barnaamijyada ku bartay luuqadda Aasaaska oo akhriyey buugaagta chess-ka ayaa noqday nin dhalinyaro ah rugbier ka hor intaadan u boodin Mareykanka. Of Isagoo ku soo noqday Argentina, wuxuu bilaabay khibraddiisii ​​ugu horeysay ee shaqo ee dhanka maaliyadda YPF.
Si dhakhso ah ayaa rabitaankii safar ee waxbarasho loogu soo duulay mar kale, oo dhaafsiisan dhiirigelinta xiriirinta raaxo, taas oo isaga siisay fursad uu ku galo jaamacad la yiraahdo “Ivy League”.
Hiddaha ganacsigu wuxuu ku jiray xubin ahaan. Si kastaba ha noqotee, 1995, fikradda ah in loo rogo, wakhtigaas, ganacsiga elektarooniga ah ee aan aqoonta lahayn weli maskaxdiisa ma uusan ku jirin.
Wax walba way is beddeleen markii uu shaqo la’aan ahaa. Galperín wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo meel fog fog YPF; si kastaba ha noqotee, iibsiga shirkadda saliida ee ay bixiso shirkadda ‘Repsol’ waxay sababtay inay ixtiraamaan waaxyadoodii, sidaa darteed waxay bilaabeen inay ka fakaraan mashaariicda.
Waxaa intaa dheer, sawirkiisii ​​ugu horreeyay ee ganacsi wuxuu la xiriiray macluumaad dhaqaale iyo goob is-weydaarsi. Laakiin, baarista moodooyinka ganacsi ee shirkadaha, wuxuu fursad u helay adduunka xaraashka internetka.
Intii lagu guda jiray MBA, Galperín wuxuu qaatay inuu noqdo hal guru mid ka mid ah aqoonyahanada maaliyadeed, Jack McDonald – oo dhintey Janaayo 2018 – kaasoo caado ka dhigtay inuu caan ka noqdo adduunka ganacsiga fasaladiisa.
Xitaa, hal munaasabad, wuxuu fadhiyey (isagoo aan ogeyn) qiyaastii toban daqiiqo fasalka ku xigga ee Warren Buffett laftiisa, xaalad uu u arkaa mid aan loo dulqaadan karin, sidaa darteed wuxuu ka codsaday McDonald inuu kula xiriiro culeyska culus ee adduunka maalgashiga si uu u awoodo. in aan kuu sheego fikradaada.
Sidan waa sida loo yaqaan “garoonka diyaaradaha” ee caanka ah oo loo abuuray duriinka ugu horreeya ee lacagta mashruucaaga.
Bishii Nofeembar 1999, Mercado Libre, oo ay haysato seddex bilood oo keliya in lagu noolaado, ayaa ku guuleysatay in ay aruuriso $ 7.6 milyan oo loogu talagalay maalgelinta. Mid ka mid ah kuwa door bidey hal abuurka ganacsi ee shirkadda HM Capital Partners, oo lammaanahiisa aasaasay wuxuu ahaa John Muse.
Galperín ayaa isaga qanciyay bilo ka hor, markii maalgashadehu booqday Stanford si uu ugu sheego khibradiisa. Intii lagu jiray maalintaas, McDonald wuxuu abaabulay in Argentine-ka uu geeyo garoonka diyaaradaha ee San José, laakiin ma uusan fileynin in labo saaxiib oo ardeyga ah, ay aad u bixi doonaan, ay galaan gaariga.
Kadib, Galperín wuxuu adeegsaday “Vivacity Creole”: wuxuu iska dhigay inuu qalad ka galay bixitaanka wadada si uu u helo 20 daqiiqo oo safar ah oo uu awood u yeesho inuu khudbadiisa sameeyo. Ugu dambayntiina, Muuse wuxuu yidhi saddexda erey ee ganacsaduhu aad u jeclaa inuu maqlo: “Waxaan doonayaa inaan maal-gashado.” Bishii Meey 2000, qaybinta HM Capital waxaa sii raaciyay dhinacyo kale oo danaynaya kuwaas oo ku duray US $ 46.5 milyan wareegii labaad ee maalgashiga shirkadda.
Laakiin, sida shirkad kasta, mowjadihii hore ma sahlaneyn in la silco. Waxaa jiray kaliya soddon meelood oo iibiya sheyga internetka ka jira ee loo yaqaan ‘eBay’, oo la asaasay 1995, oo ah qaybta ugu weyn.
Si dhakhso ah tartamayaasha maxalliga ah ayaa soo baxay, iyada oo De Remate uu yahay shaqsigiisa weyn – xitaa nuqulo midba midka kale istiraatiijiyad muuqaal ah sida bixinta magdhowga inta lagu jiro ciyaaraha kubbadda cagta – laakiin cimbronazo weyn ayaa la kulmay isaga oo leh sumadda sumadda.
Taasi waa daqiiqaddii ugu horreysay markii Galperín arkay dhamaadka “MeLi” dhamaadka. Xitaa wuxuu qirayaa inay ahayd markii ugu horreysay ee uu u qayliyo shirkadda. In kasta oo ay u maareysay dhibaatada, haddana iyada oo ay ugu wacan tahay istiraatiijiyad dagaal oo lagu hagaajinayo kharashyada iyo dakhliga labadaba, iyada oo macaashka shirkaddu noqday mid aan caadi ahayn, oo ah wax uun la gaadhay 2005.
Tan waxaa lagu daray dalab iibsi ah $ 200 milyan oo doolar oo la mid ah eBay, oo ay ku noqon doonaan iskaashi istiraatiiji ah 2001, iyada oo lagu beddelayo 19.5% shirkadda. Markaa, unicorn kii u horreeyay ee reer Argentine ayaa dhashay.
Isla waqtigaas in dhaqaalaha maxalliga ahi soo maray mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa taariikhdeeda, shirkadda Galperín waxay bilaabatay duulimaad. “Sannadkii 2002, waxay duubitaan u ahayd koritaanka iyadoo ay ugu wacan tahay duruufaha soo noqnoqday taasoo dadka ku kalliftay inay dadka iibiyaan waxyaalahaas oo dhan oo aysan u baahnayn,” ayuu yiri madaxa ML.
Ballaarinta gobolku muddo dheer kuma imaanin, marka hore Uruguay – oo ah waddan uu degay 2002 ilaa 2016 oo uu usbuuc kasta u safro Buenos Aires si uu uga shaqeeyo -, Mexico iyo Brazil, ka dibna wuxuu la wadaagaa Ecuador, Chile, Venezuela iyo Colombia , ilaa laga gaadhayo 19ka dal ee ay hadda ka hawl gasho.
In kasta oo uu ku dhashay dhulka waddanka, Argentina waa suuqga labaad ee shirkadda, maadaama ay ku kordhiso 26% saamiga biilasha ee saafiga ah. Brazil ayaa ugu horeysa iyadoo leh 60%, taasi waa qiyaastii US $ 1,213 milyan
Min ganacsade ilaa ganacsade
Galperín waxaa laga yaabaa inuusan noqon a iska dhigay nin haddii fikradan loo qaato qeexitaan adag oo ah “nin laga sameeyay xoq”, laakiin wuxuu ku guuleystey inuu maalkiisa ka yeesho meel ka baxsan ganacsiga qoyska.
Waxay ahayd tii afaraad ee shan nin oo walaalo ah oo xiriirkooduna la yeesho maqaarka maqaarka ayaa ku koobnaa in la caawiyo inta lagu jiro xilliga xagaaga. In kasta oo ‘khuraafaadka’ “MeLi” ee ka bilaabmay garaashka uu duulaya, haddana fikradan waxaay la xidhiidhaa mid jacayl ah oo aan ahayn aragtida dhabta ah.
Si ka duwan Apple, oo qaaday tallaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay garaashka guriga Steve Jobs, Galperín iyo “wiilasha Stanford” waxay ku sugnaayeen laba fara badan oo baabuurta la dhigto oo ku yaal Saavedra oo ay iska lahaayeen qoyskiisa. Marka hore waxay ku xidheen durlock dhawr shirqool, markay sii koreenna, waxay ku darsadeen meelo. Ilaa ay ku qasbanaadeen inay guuraan.
Labadan sano gudahood, guulo dhowr ah ayaa lagu daray. Wuxuu u magacaabay joornaalka Forbes inuu yahay mid ka mid ah 40-ka ganacsatada ugu guulaha badan ee ka hooseeya 40. Sanadkii 2017, isagoo horey u 46 sano jir ah, wuxuu galay darajada ugu taajirsan adduunka isagoo leh $ 1 bilyan oo doollarka Mareykanka, isagoo noqonaya kii 7-aad ee Argentine ee taa liiska.
Sannadkii 2007, Meli wuxuu noqday shirkaddii ugu horreysay ee reer Argentine ee ka ganacsata shirkadda Nasdaq toban sano ka dibna wuxuu beddelay wax aan ka yarayn Yahoo! Buugga Nasdaq 100, waa tusaha isu keenaya boqolaal shirkadood oo tikniyoolajiyadeed oo waaweyn.
Laba sano kadib guushaas, Mercado Libre waxay ku dhawaad ​​laba jibaarantay suuqgeynteedii suuq – US $ 24.4 bilyan – iyo xitaa dhowaan waxay ku guuleysatay inay si guul leh ugu dhajiso $ 1 bilyan suuqa saamiyada Mareykanka.
In kasta oo ay jiraan wax soo shaac baxay oo ah shirkadiisa, had iyo jeer wuxuu ahaa nin beeralay sumcadda hoose. Nin ganacsade ah iyo ganacsade jiinis, oo aan lahayn xafiiskiisa, kaas oo ku wata laptopkiisa jiidaha jiida si Piacere iyada oo loo marayo marinnada saddexda dabaq ee uu ku yaal Torre Al Río, oo ku yaal Vicente López. “
Dhamaanteen waxaan sugeynaa in Mercado Libre kale ay soo baxdo, waxaan ahay kan ugu horeeya ee doonaya in taasi dhacdo, ”ayuu qirtay. Dhanka kale, wuxuu sii wadaa inuu injineer ka sameeyo isbadalka joogtada ah ee shirkadiisa, taasoo si isa soo taraysa ugu weecatay dhanka ganacsiga maaliyadeed. waxay xaqiijineysaa inaysan bangiyadu walwal gelin: “Uma arko inay tartamayaan, maadaama ay bartilmaamedsanayaan dhagaystayaal kala duwan.”
Galperín wuxuu rumeysan yahay “nasiibku waa muhiim in la fuliyo, laakiin marka aad ku sugan tahay waqtiga saxda ah iyo sida saxda ah. Haddii aad wax walba ku sameysay meesha aad rabto, waad nasiib badnaan doontaa.”
In kasta oo boqortooyadii aan rumeysanahay iyo inta u hartay uu ka qabtay “Meli”, naftiisa aan xasilneyn waxay ka dhigeysaa mid ka sii fiirsanaya: “Waqti qaar waxaan doonayaa inaan idhaahdo waa waqtigii la qaban lahaa wax kale. nolosha oo dhan inay lahaato waxay ahayd oo keliya Mercado Libre ”.